Samsung Mobile Care သည်သင်၏စမတ်ဖုန်းအတွက်တရားဝင်အာမခံဖြစ်သည် Androidsis
ကျွန်ုပ်တို့သည်စျေးနှုန်းအလွန်မြင့်မားသောစမတ်ဖုန်းများနှင့်အတူနေထိုင်ရန်အသုံးပြုထားပြီးဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည်အမြင့်ဆုံးသောစမတ်ဖုန်းများဖြစ်သည်။ သူတို့ကနောက်ဆုံးပေါ်နောက်ဆုံးပေါ်ကိုကမ်းလှမ်းသည်၊ ၎င်းသည်လက်ရှိတွင်ရွှေစျေးနှုန်းဖြင့်ပေးချေသည်။ အုပ်ချုပ်မှုနှင့်အထူးသဖြင့်ဝယ်ယူနိုင်စွမ်းအားဖြင့်အမြဲတမ်းနောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်ကြ၏သောသူများရှိပါသည်။
သို့သော်နောက်ဆုံးပေါ်ပစ္စည်းကိုကိုင်ဆောင်ရန်ငွေရေးကြေးရေးအရကြိုးပမ်းသူများလည်းရှိသည်။ ထိုအဘို့, စက်ပစ္စည်းအချို့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပျက်စီးမှုခံစားနေရပြီးကြောင်းတစ်ခုဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်သည်။ ငါတို့ရဲ့မိုဘိုင်းဖုန်းကိုချိုးဖျက်တာ၊ ဖျက်ဆီးတာကိုဘယ်သူမှမကြိုက်ဘူးဆိုတာရှင်းနေတယ်။ ဒီအဘို့နှင့်အခြားအကြောင်းပြချက်များအတွက်, Samsung Mobile Care ပါ.
သင်၏ Samsung ကိုကာကွယ်ရန်တရား ၀ င်အာမခံ
ပို။ ပို။ ဖြစ်ပါတယ် လေ့, Que ကျနော်တို့စမတ်ဖုန်းကိုဝယ်တဲ့အခါ ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ သင့်အားအာမခံတစ်ခုပေးရန်ကျွန်ုပ်တို့အားအဆိုပြုပါ။ အမျိုးအစားများစွာရှိပြီးအမျိုးမျိုးသောလွှမ်းခြုံမှုရှိသည်။ ရသောအခါ ဘာပဲ ကျနော်တို့ဝယ်ယူမြင့်မားသောစျေးနှုန်းနှင့်အတူစမတ်ဖုန်းတစ်ခုဖြစ်သည်ကောင်းသောအာမခံ ဒါဟာမကောင်းတဲ့စိတ်ကူးမဟုတ်ပါဘူး.
Samsung Allianz သည်အာမခံကုမ္ပဏီနှင့်အတူ "Samsung Mobile Care" ကိုစတင်ခဲ့သည်။။ သင်၏ Samsung စမတ်ဖုန်းအသစ်ကိုမတော်တဆမှုများမှ ၂၄ လကြာအောင်ကာကွယ်နိုင်ရန်အာမခံထားသည် သာဝန်ဆောင်မှု ငှားရမ်းထားနိုင်ပါတယ်အနည်းဆုံးယခုအချိန်တွင်တစ်ခုတစ်ခုကိုဝယ်ယူသောအခါ ကိုရီးယားကုမ္ပဏီ၏အကျော်ကြားဆုံးစမတ်ဖုန်းများ.
ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဝယ်ယူမှသာ Samsung Mobile Care အာမခံကိုထုတ်ယူနိုင်ပါသည် Samsung Galaxy S7, S7 Edge, S8, S8 Plus or Note 8။ ဤအကြောင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ဤစက်ပစ္စည်းတစ်ခုမှတစ်ခုကိုအာမခံထားရန်ဆိုလိုသောစျေးနှုန်းများသာရှိသည်။ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်ခွဲတမ်းကိုအခြားစက်ပစ္စည်းများသို့တိုးမြှင့်ပေးရန်ကုမ္ပဏီကထုတ်ပြန်ထားသည်မဟုတ်ပါ။
အ လွှမ်းခြုံမှု ဒီအာမခံအားဖြင့်ကမ်းလှမ်းသောသူတို့ဖြစ်ကြသည် မတော်တဆထိခိုက်မှုများအတွက် သူကိုယ်တိုင်။ ပြီးတော့သူကကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်ချစေတယ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်နှာပြင်၏အစားထိုး ဒါကြောင့်ချိုးလျှင်။ စိတ်ချရသောဤအာမခံအမျိုးအစားကိုအကျိုးရှိစေသောအရာ။ ၎င်း၏စျေးနှုန်းကျနော်တို့ကပေးချေရန်ဆုံးဖြတ်လျှင် ၂၄ လအတွင်းလစဉ်ယူရို ၅.၉၉ ဖြစ်သည် ၎င်း၏ကြာချိန်၏။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Samsung ပစ္စည်းကိုလည်းလုံခြုံအောင်လုပ်နိုင်ပါတယ် 129 ယူရို၏တစ်ခုတည်းငွေပေးချေ.
ဤစမတ်ဖုန်းများထဲမှမည်သည့်မျက်နှာပြင်ကိုမဆိုအစားထိုးရန်ကုန်ကျသည်ကိုသိထားလျှင်အာမခံသည်စျေးကြီးပုံမပေါ်ပါ။ သင်ဤအာမခံရှိသည်သိရန်ရှိသည်ပေမယ့် အချို့သောကန့်သတ်ချက်များ။ ဒီတော့ ၂၄ လစာချုပ်သက်တမ်းအတွင်းကျွန်ုပ်တို့သည်မတော်တဆမှုတစ်ပိုင်းလျှင်နှစ်ပိုင်းသာပေးနိုင်သည်။ ဒါတောင်မှဒီအာမခံအတွက်တက်သည်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ အကယ်၍ သင်သည်အဆင့်မြင့် Samsung အသစ်တစ်ခုကို ၀ ယ်တော့မည်ဆိုပါကလူကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်လိုလျှင် Samsung Mobile Care သည်သင့်ကိုစိတ်ဝင်စားလိမ့်မည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Samsung » Samsung Mobile Care သည်သင်၏စမတ်ဖုန်းအတွက်တရားဝင်အာမခံဖြစ်သည်